Haweeney Kasta Waa Inay Sagaalkaan Waxyaabood U Sheegtaa Ninkeeda | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Haweeney Kasta Waa Inay Sagaalkaan Waxyaabood U Sheegtaa Ninkeeda
Haweeney Kasta Waa Inay Sagaalkaan Waxyaabood U Sheegtaa Ninkeeda
Aayaha editor Send an email November 15, 2018
Aqriso 9 waxyaabood oo ay tahay in haweeney kasta ay u sheegto ninkeeda/seygeeda.
Usheeg waxaad rabtid
Haween badan ayay dhibaato kusoo wajahdaa aamusnaanta isla markaana ku dhammeysta niyad jab marka waxaa wanaagsan in wax walbo ood rabtid aad u sheegtid. Waxaa jira waxyaabo ay gabar walbo ka filaneyso ninkeeda waxaana muhiim ah inaad la xiriirtid markaas wuu ogaanayaa waxaad ka rabtid. Haddii aad necebtahay waxyaabaha uu kaala soo daaho, had iyo jeer usheeg.
Ha ogaado markaad careysantahay
Intaad isku koobi lahayd oo aad ninkaaga ka filan lahayd inuu ogaado, waxaa muhiim ah inaad u ogolaatid inuu ogaado intuu kaa murugoon lahaa. Ha filan in ninkaaga uu aqriyo maskaxdaada sababtoo ah ma awoodyo. Naftaada ma wanaajin markaad carada qarsatid.
Usheeg waxaad ka fileysid sariirta
Haweeney kasta baahi kala duwan oo dhanka sariirta ah ayay qabtaa marka waxaa wanaagsan inaad usheegtid baahidaada sariirta.
Usheeg waxyaabaha aad ka rabtid inuu sariirta ku sameeyo iyo sidaad jeclaan lahayd inuu howsha uwado. Usheegitaanka tan waxay hormarineysaa shaqadiina sariirta.
Usheeg waxyaabaha aadan ka fileyn inuu sameeyo
Haddii aad rabtid inaad carada iska ilaalisid mar kasta, fadlan usheeg waxyaabaha aadan rabin inuusameeyo. Usheeg waxyaabaha uusameeyo balse aadan rabin inuu sameeyo iyo sida aad rajeyneysid inuu wax u sameeyo oo sidaas ka duwan.
Usheeg hadeey kugu adagtahay aaminaadiisa
Waxaa macquul inaad qiyaano ku qabatay ama uusameeyay wayaabo burburiyay kalsoonidaada oo sababay inay adkaato inaad aaminto mar kale, waa muhiim inaad usheegtid taas. Ninkaaga wuxuu ubaahanyahay inuu ogaado waxyaabaha aadan ku aamineyn markaas wuu ka fogaanayaa si kalsoonida uu dib ugu dhiso.
Usheeg hadii aadan xiriirka ku faraxsaneyn
Waxaa wanaagsan inaad usheegto haddii aadan ku faraxsaneyn xiriirka iyo dhibka jira six al loogu helo dhibka.
Ogeysii marka aad niyad jabsantahay
Haweenka waa niyad jab badanyihiin mararka qaar. Waxaa arrin wanaagsan ah inaad usheegtid marka aad xaalad adag ku jirtid intaad ka qarsan lahayd.
Usheeg inaadan ku faraxsaneyn haweenka uusaxiibka layahay
Haddii aad ogtahay inaadan ku faraxsaneyn haweenka uu ninkaaga saaxiibka layahay, waxaa muhiim ah inaad ogeysiisid intaad kaligaa dhibtoo lahayd. Micnaheeda ma ahan inaadan ku kalsooneyn, waa inaadan ku faraxsaneyn fikraddaas oo idil, usheeg oo iska ilaali inaad aamusnaan ku dhimatid.
Usheeg halka uu xiriirkaaga u socdo
La fadhiiso oo weydii qorshaha uu uhaayo xiriirkiina. Waad mudantahay inaad ogaatid halka uu xiriirka ku wajahanyahay.
Sababta Haweenka Caqliga Leh Aysan Ragga Uga Dhigan Halbowlaha Noloshooda
Ma jin buu ahaa mise qof wixii Jigjiga lagu dilay?
Sida Loo Helo Jacayl Mar Kale Furiinka Kadib